Google Pixel 4 ga-enwe mbugharị x8 na igwefoto ya | Androidsis
Google Pixel 4 ga-enwe mbugharị x8 na igwefoto ya
Google Pixel 4 ga-abụ ọgbọ na-esote nke ekwentị dị elu site na ụlọ ọrụ America. Na-eso ihe ịga nke ọma nke Pixel 3a, nke ahụ enyerela ụlọ ọrụ aka okpukpu abụọ ahịa ya, enwere otutu olile anya na uzo ohuru ohuru a. Anyị amatala akụkụ nke imepụta ụdị ndị ọhụrụ a maka ọnwa, yana igwefoto ha, nke ga-abụrịrị otu n'ime ike ha ọzọ.
Emechara ka ekpughe ya ihe ntụgharị ihu nke Pixel 4 ga-eji. Ugbu a, anyị nwetara nkọwa ọhụrụ banyere igwefoto ekwentị, nke a ga-emeziwanye, dị ka a na-ekwu maka ọnwa. Ọzọkwa mbugharị nke otu ihe na-aga ka mma a na uche.
O yiri ka ngwaọrụ a ga eji x8 mbugharị na igwefoto ya, dị ka a hụrụ na ọhụụ ọhụrụ. Amabeghị ma ọ bụrụ na nke a ga-abụ mbugharị anya ma ọ bụ ngwakọ ngwakọ, mana ọ nwere ike bụrụ ọganihu dị mkpa maka ekwentị na mpaghara a, nke nwere ike ịdị oke mkpa na mpaghara Pixel 4s a.
Mbugharị igwefoto bụ ihe nwetaworo mkpa pụrụ iche afọ a. Anyị ahụwo ya na Huawei P30 Pro yana yana ụdị OPPO. Ọbụna Motorola hapụrụ anyị ụbọchị ole na ole gara aga na Otu Zoom, nke na-eweta mmelite na nke a. N'ihi ya, ọ bụ isi ihe dị mkpa taa.
Ọ ga-interesing lee ihe Google kwadebere na Pixel 4 na nke a, nke ga-emeziwanye ihe ọtụtụ ndị hụrụ dị ka igwefoto kachasị mma n'ahịa. O nwere ike inyere aka melite ahịa nke ezinụlọ a, nke bụ ihe ndị nrụpụta America chọrọ.
Anyị ga-ege ntị na akụkọ gbasara ekwentị ndị a. Ihe ngosi nke Google Pixel 4 ga-eme na mbido Ọktọba, dị ka ọ bụ omenala maka ụlọ ọrụ. Ekwenyebeghị ụbọchị ha mere, ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ ihe ọhụrụ na ha ga-eme ya n'otu ụbọchị dịka nke afọ ndị gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Google Pixel 4 ga-enwe mbugharị x8 na igwefoto ya
A ga-amalite Huawei Mate X na October
Egwuregwu agba na-eto eto na okooko osisi na Colorzzle